Ese maMicrosoft maakaunzi maakaunzi akaendeswa kuOptlook.com pakutanga kwa2017, sechikamu chevandudziro yavo. Sechinosungirwa chikamu chekutama, vashandisi vaizofanira kubatanidzazve yavo Outlook 2013 uye Outlook 2016 desktop email vatengi kuOptlook.com. Kusadaro, zvaizoreva kuti kuyananiswa kweemail kwaizomira.
Kana iwe ukatarisana nematambudziko mushure mekusimudzira uye kubatanidzazve Microsoft Outlook desktop mutengi kune Outlook.com web app, pane yako Windows PC, zvino ichi chinyorwa chinokubatsira kugadzirisa nyaya yacho.
Troubleshoot inosangana neAptlook.com kutama
Kunyangwe zvakanakira kusimudzira, hapana chakakwana pakutanga. Kuenda kwacho hakuna kunge kwakakanganisa uye vashandisi vaudza matambudziko mashoma. Ngatitarisei kwavari.
Email account account zita rinoratidza semaonero_ [marefu akateedzana evatambi] @ outlook.com
Nyaya yakakomba yakamhan'arwa neavo vakatamira kuAptlook.com ndeyekuti zita reiyo email account rinoratidzika semaonero_ [marefu akateedzana] @ outlook.com muFolder Pane. Izvo zvinokonzeresa dambudziko nekuti vanogamuchira vanogamuchira tsamba nemaonero_ [marefu akateedzana erefu akateedzana evatambi] @ outlook.com seye mutumira email ID. Zvino kana iye anotumira akadavirira kuiyo email ID, izvo zviri pachena kuti haisi yako, iyo tsamba inodzoreredza.
Iri dambudziko rakanyanya kune vashandisi vanoshandisa iyo Outlook mutengi pa Windows uye inoshanda zvakanaka neAptlook.com.
Kuti uigadzirise, enda ku account.live.com/names/Manage uye gadza yako Email yeAptlook.com seyako ekutanga ma alias. Bvisa mamwe ese maemail ID.
Kudzokororwa kwecheti kunokurudzira paOptlook yeAptlook.com maakaundi akabatana
Nepo kudzokororwa kwechokwadi kwekuremekedza iri nyaya inozivikanwa nevatengi veOptlook (yeavo ese mavhezheni), kana ikaitika mushure mekutama kuenda kuAptlook.com, inogona kunge iri dambudziko rechipiri-nhanho yekuongorora. Usati waedza akajairwa matanho sekushandisa iyo SARA Chishandiso kugadzirisa Outlook & Hofisi 365 matambudziko, kudzima Windows zvitupa, kuvaka zvakare chimiro, nezvimwe, tarisa kana wagadzira iyo App password kuti uwedzere iyo account muAptlook.
Outlook inopunzika mushure mekutamira kune Outlook.com
Kunyange pasina chokwadi chekupfura chawanikwa nekuda kwenyaya iyi, Microsoft yakaraira vashandisi kuti vagadzire nyowani mamiriro eAptlook. Kugadzira iyo nyowani Outlook chimiro. Kana izvi zvikasagadzirisa nyaya yacho, shandisa chishandiso cheSARA kune mamwe matambudziko.
Haikwanise kutumira maemail kubva ku3d party party email ID kana yakabatana neAptlook.com primary account
Kana iyo yemushandisi yeOptlook yeWindow yakagadzwa neAptlook.com seakaundi yayo yekutanga, mushandisi haazokwanisa kutumira maemail nevechitatu bato email ID sengeGmaill, yahoo, nezvimwe. Ichi ndicho chimiro chekugadzira. Yakanakisa workaround ingave yekuchinja iyo yekutanga account. Nekudaro, mushandisi aigona kutumira maemail ne @Outlook, @Live uye @Hotmail email maID. Chinangwa chiri kuseta uku chiri pachena kusimudzira kushandiswa kwezvigadzirwa zveMicrosoft.
Vagashiri vanogashira winmail.dat faira yekubatanidza pamwe chete neye mail
Iyi nyaya iri kuongororwa. Anogamuchira anogamuchira faira rakanzi winmail.dat pamwe chete neyakajairwa tsamba. Kunyangwe isiri resolution yakataurwa neMicrosoft parizvino, zvinozivikanwa kuti hazviitike kana iyo tsamba yatumirwa kubva kuOptlook.com. Izvi zvinogona kushandiswa sekushandira panguva ino.
Zita rekambani rinoshayikwa mumafoni pane syncing kune server
Kunyange pasina chisarudzo chakataurwa zvakafanana, chimwe chinhu chakanakisa chingaitwe kuwedzera ruzivo rweakakosha macontact pane Outlook.com (saiti) pachayo. Kana isu tinogona kuyedza kuyananisa Outlook kuseva zvakare kana ikashanda.
Email yemutumisi inowedzerwa kune 'To' munda otomatiki uchitumira tsamba
Paunenge uchiwedzera akawanda anogamuchira kune tsamba, iyo yekutumira yega email ID inowedzerwa kune 'kune' munda otomatiki. Iyo itsikidzi inozivikanwa, mhinduro yacho ichiri kuwanikwa. Izvo zvakanak izvo zvinogona kuitwa sekushandira kwazvino kudzima iyo yakasara email email ID nemaoko.
Haikwanise kutumira email kuKubata Boka muAptlook
Paunenge uchiedza kutumira tsamba kuboka rekubatana, Outlook inopa kukanganisa "Kanganiso isingatarisirwi yaitika. "
Microsoft haina kukwanisa kuwana gadziriso yeiyi sezvazvino, asi runyorwa rwekuonana runogona kuwedzerwa uye email inogona kutumirwa kune runyorwa rwemaID.
Kubva kumunda kunogara kuchiratidza email yeAptlook.com email
Kune avo vane maakaundi akawanda ane hukama neAptlook 2013 yavo kana Outlook 2016 ye Windows, iyo kubva kumunda inogara ichikanganisa kune yavo Outlook.com email ID pavanoyedza kutumira maemail kubva kune avo maakaundi.
Sezvo nyaya iriko neyakavakirwa uye zvinoita sekunge pasina kugadzirisa, akati wandei emabasa ekuyedza anogona kuyedzwa.
Kana nyaya ikasanetsa zvakanyanya uye mushandisi achishandisa maakaunzi ake kazhinji, iyo 'kubva' munda inogona kuchinjwa nguva dzese usati watumira tsamba.
Kana iwe uchida kwenguva yakareba yekushandira padambudziko iri, gadzira isina Dhata Dhata Faira uye wotangazve iyo Outlook ye Windows nemhosva.
Zvishoma zvezvinhu zvinofanirwa kucherechedzwa kana uchienda kuOptlook.com
Multiple zvishandiso: Kana mushandisi aine akawanda madhijitari, zvese zvishandiso zvinoshandisa Outlook ye Windows desktop mutengi inofanirwa kuve yakabatanidzwazve kuOptlook.com.
Nhare mbozha: Nhare mbozha haishandisi mutengi mumwe chete sematafura. Nekudaro ivo havadi kuti vabatanidzwe zvakare kune Outlook.com.
Mac masystem: Mac masisitimu haashandise iyo Outlook ye Windows mutengi. Nekudaro ivo havadi kuti vabatanidzwe zvakare kune Outlook.com. Iyi nzira ndeye chete yeOptlook ye Windows desktop vatengi.
Dhata yekuchinjisa: Dhata rese rakachengetwa pane server raizoendeswa kune Outlook.com Nekudaro, madhiri uye bhokisi rekunze zvinogona kubviswa sezvo zvakachengetwa pasisitimu yemuno. Unogona kuvatsigira kana zvichidikanwa.
Auto-makero akazara: Chero chinhu chinoitika kune aya runyorwa chingave chakafanana nechiito pakuvakwazve nyowani Outlook chimiro. Muzviitiko zvakajairika, Outlook.com yaizotora maemail kero kubva kune runyorwa rwe ID yawakatumira.
Kunyange pasina chigadzirwa chakakwana, Microsoft iri kushanda nesimba kuita kuti shanduko iyi ive inotsvedza sezvinobvira kune vashandisi vayo.
Maitiro Ekugadzirisazve Email Maakaundi Mu Windows 10 Mail App Akaundi Chinyorwa
Ungatumira Sei Email mu WordPress uchishandisa iyo Gmail SMTP Server